वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ : August 2008
वसन्त Basanta 巴萨塔 バサンタ August 31, 2008
आफू आएको बाटो लामो भइसकेछ
बास बसेका ती पाटीहरु यात्राका अनगिन्ती मोडहरुमा
भिरालो पाखो बारीमा बूढा बालाई एक्लै छोडेर,
सबै सबै ठाऊँमा सधैँ सधैँको लागि
सबै सबै ठाऊँमा सधैँ सधैँको लागि परदेशी भइसकेछु।
धेरै पछि एउटा किताब पढियो। पढ्न पनि तालले पढियो, १२९ पृष्ठको किताब पढ्न १२९ दिननै लगाईयो होला! अड्डा जाँदा र घर फर्कँदा बसमा कहिलेकाहीं पढेर सिध्याइयो । तर बुझ्न चाहिँ केहि पनि बुझिएन!किताब पढ्न बसेपछि 'एक बसाई'मा सक्न पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ (राम्रोको हकमा!)। यो एक बसाई भनेको हलचलनै नगर्ने भन्न खोजेको हैन। दैनिक नित्यकर्म बाहेक अरु काम गर्नु नपरेर ढुक्कले पढ्ने मेसो मिल्ने स्थितिलाई भनेको हो (निद्राको भने माया मार्न सकिन्छ)। त्यस्तो मौका मिलेन र 'टुक्रे' पाराले पढ्नुपर्यो भने स्वादै नआएजस्तो लाग्छ। त्यस्तो मौका बाल्यकालमा धेरै थियो। विस्तारै घट्दै-घट्दै गएर अहिले शून्यमा पुगेको छ। पछिल्लो पटक चार वर्ष जति अगाडि होला, 'दा भिन्ची कोड' रातभरि बसेर पढेको थिएँ, त्यो पनि धेरै वर्षपछिको घटना थियो। त्यसपछि ठूलो आकारको कुनैपनि कृति पढेको छैन। यस बीचमा पनि थोरैनै भएपनि केहि किताब किनियो, कति उपहारका रुपमा हात लागे, कति उपहारका नाममा भिडाइए, पैसा तिराएर। तर ती सबै किताबले आफनो 'कौमार्य' कायमै राखेका छन् अझै (र मेरो आलस्यको प्रमाणको रुपमा धूलोको पत्र बाक्लिँदै गएको छ ती माथि)।उपन्यासजस्ता ठूला दारका कृतिमात्र हैन, पत्रिकाहरुका अलिक लामा कथाहरुपनि पढ्न छोडिदिएँ। अचेल पत्रिकाहरुका गजल, कविता र छन् भने चूट्किला आदिहरुमा सीमित भएको छु। तर अचेल के बोध भएको छ भने 'एक बसाई'मै पढ्न पाउने मौका यो जुनीमा फेरि मिल्लाजस्तो छैन, त्यसैले 'टुक्रे' तालले भएपनि पढ्ने बानी छुटाउनुहुन्न। यहि मेसोमा धेरै दिन लगाएर जगदीश शमशेर राणाको "नरसिंह अवतार" पढियो।जगदीश शमशेरको फरक शैलीको लेखनको बारेमा पत्रिकाहरुमा केहि पढेपछि उनका कृतिहरु पढ्ने इच्छा जागेको थियो। पछिल्लो पटक डेढ वर्ष पहिला नेपाल जाँदा उनका दुई कृतिहरु किनेर ल्याएको थिएँ। अर्को "सेतो ख्याकको आख्यान" हो।"नरसिंह अवतार" को मूल आशय अँध्यारो र उज्यालो अथवा खराब र असल बीचको द्वन्द्व र अन्त्यमा उज्यालोको जीत हो भन्ने बुझिन्छ किताब पढिसक्दा। तर लेखकले प्रयोग गरेको भाषा-शैली, बिम्बहरु र प्रतीकहरु बुझ्नुभने मेरा लागि फलामका चिउरा चपाउनुभन्दा गाह्रो भयो। सोझै भनौं न अब, 'केहि पनि बुझिएन!' कृतिको पछिल्तिर ३५ पृष्ठको ब्याख्या गरेका छन् लेखक स्वयंले कृतिका बारेमा। उनले पूर्व र पश्चिम दुबैतिरका, सुदूर विगतदेखी वर्तमानसम्मका सबै साहित्यिक र दार्शनिक विचारधाराहरुको समष्टि झल्किने गरी प्रतीक र बिम्बहरुको प्रयोग गरेर लेखिएको काब्य हो भनेका छन् आफ्नो कृतिलाई। केहि थोरै विषयमा र त्यो पनि अत्यन्त सीमित ज्ञान भएको म जस्तो पाठकका लागि यो कृति बोधगम्य हुन नसक्नुको कारण यहि पनि हुनसक्छ। गाह्रो भएपनि, नबुझेपनि, धेरै ठाउँमा अनौठो 'रन्को' छोड्छ जगदीश शमशेरको लेखन शैलीले। केहि उदाहरणहरु यहाँ राख्दैछु। बाँकीका लागि तपाईँ पूरै किताब पढ्नुहोस् र आफ्नो बुझाईलाई हामीसंगपनि बाँडचुँड गर्नुहोस्।"धाँजा फाट्छ धरतीको छातीमा लरखराउँदै टेक्ने करोडौं बाटो खोज्ने समूहले सल्बलाएको हातले समात्न खोजेको पीपल बोटका वटवृक्षजस्ता जगल्टे जरा लपलपाउँदै मरेका नागको चिसो लथपथ आकारहीन लहरमा बेरिएका यस धरतीका अधमरु वासिन्दा---""फौज आउँछ संगीन लिएर यस भुमरीमा परेकालाई बचाउन। गोरु डुक्रन्छ साथको खेतमा; उसले अघौञ्जी घाँस खाएको छ। मानिस घोक्रिन्छ नासलचोकमा, ऊ सङ्गीन देखेर भागेको छ- उसले गुहारमागेको छ। भुमरीबाट बचाउने कम्पुको तानामानामा उसले मुतेको छ। माकुरे मूत- एसिड----""त्यसैले हात टेकेर हिँड्नेहरु- नाक रगडेर हिँड्नेहरु-आँखा चिम्लेर बाटो खोज्नेहरु-आइमाई छिँडीमा गाडेर सन्तान हुर्काउनेहरु-पति मारी सतीजानेहरु-कान छोपेर पुराण सुन्नेहरु-उज्यालो देखी डराउन थालेकाछन्।---""यो घर होइन ---खोरटक्---टक्---टक्हिरण्यकशिपु आएर ढोका खोल्छ,त्यो साँग्रो पलङ्गमाबूढो राजाले खापेको तरुनी,आज खालिछ;कान्छा खत्रीले स्वास्नी थुनेको छछिँडीमा।" "काटिन्छन् प्रेतका छौंडाहरुजोगिन्छन् कैयौं मृत्युदण्ड सुनेकाहरु।यौटै प्रश्न छ घैंटोमा छिप्पिएको यहाँ त'तिम्रो मर्ने पालो कि बाँच्ने?'""---'हाम्रा आमाको ब्रेसियर र भित्रीकट्टु फेला परेथ्यो भिसीका ओछ्यानमुनि' हाम्रा बाबुहरु आएर घूस ख्वाएर गएको प्रमाण छ हामीसँग'- गर्मीको बिदामा हामीले भालूको शिकार गरेथ्यौं-यहाँ क्याम्पसमा गर्न हुन्न र शिकार?---""--एउटा विज्ञापन चाहियो:यौटा सेक्रेटरी लोग्नेमान्छे या स्वास्नीमान्छे तन्नेरी अनुभवी र इमानदार, तलब पछि ठेगान हुन्छ मान्छे हेरेर काम-फाइल राख्ने, टाइप गर्ने र मालिकको सुङ्गुरको बच्चा घुमाउन लग्ने---- आदि----""जीवन बल्दो क्रान्ति-शिखा मानिस मानिस अमर ज्योतिझैं आदर्श उठाइ जल्न तयार निभ्न तयार।----""झरझर अविराम भलभल उर्लन छताछुल्ल उखाल पखाल नव-सिर्जन जीवन स्पन्दन चक्र चक्र कथन टङ्कित बज्रढाल अभेद्य अमर नर-सन्तति पुस्तनपुस्ता दलदल लथपथ उफ्री उत्री फुली सुगन्ध सुगन्ध जन-समूह वज्रनख तिक्ष्णदन्त प्रकट उदात्त उदार बलिदान जाग्रण माँड्न फाँड्न---------"जगदीश शमशेर राणासंग 'नेपाल' साप्ताहिकले लिएको अन्तर्वार्ताको लागि सूत्र यहाँ छ। किताब बुझेपनि-नबुझेपनि उनले नेपाली संस्कृतिप्रति देखाएको प्रेम र उनको विनम्र विद्वताले हामीलाई उनको अगाडि श्रद्धाले नतमस्तक बनाउँछ। "सेतो ख्याकको आख्यान" झन गाह्रो भएको चर्चा छ अन्तर्वार्तामै पनि। तर त्यो पनि पढ्न भने थाल्नैपर्ला। Posted by
गएको डेढ हप्ताजति एमालेका केहि नेताहरु जापान भ्रमणमा थिए। यसबीचमा नागोयमा आयोजित दुई कार्यक्रमहरुमा सहभागी हुने मौका मिल्यो। पहिलो, १४ तारीखकै दिन थियो। एमालेका विदेश विभाग प्रमुख र पूर्व महासचिव माधव नेपाल र श्रीमती गायत्री नेपालको उपश्थितिमा एउटा अन्तर्कृया भएको थियो। त्यस बारेमा लेखौंला भन्दा-भन्दै समयनै मिलेन; अलिकति समय मिलेपछि अप्रासंगिक भईसकको जस्तो लागेर लेखिएन। फेरि ओलम्पिक र नेपाली खेलकूदको बारेमा पनि लेख्न बाँकीनै थियो, समयको सदुपयोग त्यतै गरियो।दोश्रो कार्यक्रम अस्ति शुक्रबार साँझ भएको थियो। एमालेका तीन यूवा नेताहरु नागोया आईपुगेका रहेछन् र साथीहरुले एउटा सानो भेटघाट कार्यक्रम राखेका रहेछन्। यो कार्यक्रम अनौपचारिक र भाषणरहित हुने भनिएकोले बढी खुशी लाग्यो। तीनजनामा प्रदीप ज्ञवाली, रबीन्द्र अधिकारी र रबीन्द्र श्रेष्ठ थिए। अरु सहभागीहरु शुरुमा दशजनाजति मात्रै थियौं, पछि अरु ६-७ जना थपिए होलान्। विशेष गरी, प्रदीप ज्ञवालीका कान्तिपुरमा प्रकाशित लेखहरुबाट प्रभावित भएकोले उनलाई भेट्न उत्सुक थिएँ म। अनौपचारिक भनिएपनि तीनजना नेताहरुले केहि विषयमा छोटो (१०-१२ मिनेट जति) बोल्ने र पछि हामीले प्रश्न सोध्ने कार्यक्रम तय भयो। प्रदीप ज्ञवालीज्यूको वक्तव्य झण्डै ४० मिनेट जतिको गयो होला। नेपालको वर्तमान राजनीति, त्यसमा पनि शान्ति प्रकृयाको शुरुदेखिको आजसम्मको अवश्थाको बारेमा बोल्न भनेर भनिएपछि जति छोटो बोलेपनि त्यति त लाग्छ नै। सरल र रोचक भाषा र क्रमबद्ध प्रस्तुतिका कारण पट्यारलाग्दो भने बिल्कुलै थिएन। लेखनमा मात्रै हैन भाषण र कुराकानीमा पनि उनी अरुलाई प्रभावित पार्नसक्ने खालका रहेछन्। नत्र कतिपय नेताका सामुन्नेमै बसेर ४० मिनेट लामो मन्तब्य सुन्न चानचुने 'आँट' र 'त्याग'ले सकिँदैन! उनले संविधानसभा-चुनावको अप्रत्याशित परिणामको बारेमा पनि कुरा गरेका थिए र माओवादी नेतृत्वको सरकारको अपरिहार्यताको वकालत गरेका थिए। माओवादीले पाएको मतको एक तिहाईमात्रै प्रतिबद्ध 'माओवादी' मत भएको, एक तिहाई डर-त्रासको भएको र बाँकी एक तिहाई भने 'एक पटक माओवादीलाई पनि हेरिहालौं न त' भन्ने खाल्को मत भएको विश्लेषण थियो उनको। अघिल्लो हप्ता माधव नेपालले पनि यस्तै विश्लेषण पस्केका थिए। यो विश्लेषण सही होला केहि हदसम्म तर एमालेका नेताहरु यसैमा भर परेका छन् जस्तो देखिन्छ। उनीहरू माओवादीले सरकारमा गएर गल्ती गर्ने र त्यसका कारण 'माओवादीलाई पनि हेरिहालौं न त' भन्ने समूह उनीहरुलाई छोडेर आफूतिरै फर्किने गणितमा आफूलाई अभ्यस्त पार्न थालेका देखिन्छन्। त्यतिखेरसम्म 'डर-त्रास समूह' पनि माओवादीको पासोबाट उम्किसक्ने अनुमान छ उनीहरुको। यसको अर्थ, अर्को चुनावमा माओवादी पत्तासाफ हुनेछ र कांग्रेस-एमालेका दिन फिर्नेछन् फेरि। यो विशलेषणमात्रै हावी भयोभने स्पष्ट छ उनीहरु फेरि खाल्डामा पर्नेछन्। माओवादीले समाजको निम्नतम तहमा गरेको ब्यापक संगठन विस्तार र चुनावमा गरेको प्रतिबद्ध कार्यकर्ता-समर्थक परिचालन आदिलाई पनि हेरेनन् भने आउने चुनावमा पनि दुर्घटनामा पर्ने भनेका एमाले-कांग्रेसनै हुन्, माओवादी हैन। त्यसपछि छोटो मन्तब्य थियो रबीन्द्र श्रेष्ठको। उनी संविधान सभा चुनावको केहि समय पहिला माओवादी छोडेर एमाले प्रवेश गरेका थिए र उनको मन्तब्यको मूल विषय पनि यहि थियो। छोटो समय भएकोले त्यति विस्तृत कुरो आउनसकेन, तर जति सुनियो त्यतिका भरमा भने उनले माओवादी छोड्नुको कारण "माओवादीले जनयुद्धलाई सफल नबनाई, टुंगोमा नपु-याई बीचैमा वार्तातिर लागेको" भन्ने बुझियो। तर त्यो कारणले माओवादी छोडेपछि एमाले पसेको 'विरोधाभाष' लाई साम्य पार्ने चित्त बुझ्दो ब्याख्या भने आएन। यसमै बढी छलफल गर्ने समय पनि थिएन, फेरि अलिक ब्यक्तिगत ढंगले लिईदिने सम्भावना पनि हुन्छ।रबीन्द्र अधिकारीले छुट्टै मन्तब्य दिएनन्, तर छलफलका बेलामा उनले निकै सकृयतापूर्वक हाम्रा जिज्ञासाहरुका जवाफ दिएका थिए।पछिको छलफलमा नेपालको राजनीतिको बारेमा थप चर्चा भयो। जापानको आर्थिक-सामाजिक ब्यबश्थाको बारेमा र जापान बसाईको हाम्रो अनुभवका बारेमा नेतात्रयको तर्फबाटपनि जिज्ञासाहरु राखिएका थिए। समग्रमा तीन युवा नेताहरुसंगको एक साँझ फलदायी र रमाईलै रह्यो।
अरुका सपनाहरु धमाधम साकार भईरहँदा मनमा प्रश्न आउँछ घरी-घरी, हाम्रा सपनाहरुको पालो कहिले? हामीले ओलम्पिक आयोजना गर्न सक्ने कहिले? हामीले पदक जित्ने कहिले?ओलम्पिक खेलकूद आयोजना गर्ने कुरालाई अलि परै राखौं, हाम्रो अर्थतन्त्र (र विश्व समुदायभित्रको हाम्रो कूटनीतिक/सामरिक उचाई) मा आजैबाट प्रगति हुन थालेपनि हाम्रो बुताले त्यो भ्याउन अलि लामै समय लाग्ला। तर ओलम्पिकमा केहि पदकहरु जित्न हामीलाई के ले छेकेको छ? एउटा आधुनिक राष्ट्रको रुपमा झण्डै छ दशक बिताईसक्दा पनि ओलम्पिकमा हाम्रो उपलब्धि शून्य रहनु लाजमर्दो कुरा हो। (सोल ओलम्पिकमा बिधान लामाले कास्य पदक जितेका थिए तेक्वान्दोमा, तर त्यो प्रदर्शन खेलको रुपमा राखिएको थियो। प्रदर्शन खेलको पदकलाई औपचारिक मानिँदो रहेनछ।)किन यति दयनीय छ हाम्रो खेलकूद स्तर?बच्चामा, फुटबल आदि खेल्न गयो भने ‘राम्रैसंग’ गाली खाइन्थ्यो। मुख्यत: दुइ आशय हुन्थ्यो गालीको, एउटा ‘अब हात-खुट्टा भाँच्ने भयो यल्ले, अपाङ्ग हुने भयो’ र अर्को ‘पढ्न छोडेर खेल्छ, बिग्रियो यो।‘ यो प्रसंग ल्याउनुको कारण के हो भने कुनैपनि समाज-देशले खेलकूदमा प्रगति गर्नको लागि सबैभन्दा पहिला समाज र देशमा बलियो खेलकूद संस्कृतिको आवश्यकता हुन्छ। परम्परागत रुपमा हाम्रो समाजमा खेलकूद संस्कृतिको अंश अत्यन्त न्यून छ। केहि अत्यन्त सीमित अवसरमा बाहेक खेलकूदलाइ त्यति महत्व दिईँदैन र हाम्रो समाजमा खेलाडीहरुको बिल्कूलै सम्मान हुँदैन। छोराछोरी खेलकूदतिर आकर्षित होलान् भन्ने डरले बाउ-आमा त्राही-त्राही हुन्छन् हरबखत। हो, खेललाईनै पेशा बनाएर बाँच्न सकिने अवश्था अझै राम्ररी बनिसकेको छैन हाम्रो देशमा, तर समाजमा खेलकूद संस्कृतिले जरा नगाडेसम्म, खेलाडीहरुले समाजमा सम्मानजनक स्थान नपाएसम्म त्यो अवश्था आउन पनि सक्ने छैन। दुबै कुरा एकापसमा राम्रैसंग निर्भर छन्। भुँडी लाग्नुलाई ‘ब्यक्तित्व’ मानिने हाम्रो समाजमा खेलकूदको अवश्था कहाँ छ भनेर लामो ब्याख्या गरिरहनु आबश्यक पनि छैन। सीमित रुपमा रहेका हाम्रा परम्परागत खेलकूदहरु पनि धेरैजसो मासिईसकेका छन्। हो, हाम्रा परम्परागत खेलकूदहरु धेरैजसो ‘खेलकूद’ भन्न पनि नसुहाउने खालका छन्, तर एक-दुईलाई विकास गरेर अन्तरराष्ट्रिय मञ्चहरुमा लैजान सकिन्थ्यो। नेपालको तराइमा पहिलेदेखिनै कुस्ती अत्यन्त लोकप्रिय छ। हामीले यसलाई विकास गरेर हाम्रो मौलिक शैलीको कुस्तीको रुपमा दुनियाँसामु पेश गर्नसक्ने सम्भावना थियो। छुट्टै शैलीको कुस्तीको रुपमा विकास गर्न सकिदैंन भनेपनि तराइका जनताको कुस्तीप्रतिको आकर्षणलाई सफल कुस्ती खेलाडीहरु जन्माउने आधारको रुपमा लिन सकिन्छ। मैले हालसालै कतै पढेको थिएँ, यो पनि लोप हुने क्रममा छ। पहिलो कारण, कुस्तीबाजहरुलाई प्रोत्साहन, तालीम रोजगारी आदिको अभाव छ। दोश्रो, यति हुँदाहुँदै पनि संघर्ष गरेर बाँचिरहेको तराइको कुस्ती-परम्पराको सबैभन्दा ठूला दुश्मनका रुपमा तराइका जमीन्दारहरु निक्लेका रहेछन्। उनीहरु कुस्तीबाजहरुलाई झूटा डाँका-मुद्दा लगाइदिँदा रहेछन्। अब यस्तो अबश्थामा कसरी निरन्तर हुनसक्छ त्यो परम्परा?! यी जमीन्दारहरु हाम्रो राज्यका प्रभावशाली हिस्सा हुन् र यीनको सोचले हाम्रो समग्र राज्यको खेलकूदप्रतिको सोचलाई प्रष्ट पार्छ। यो ओलम्पिकलाई नै हेरौं न। अरु देशका राष्ट्रपतिहरु खेलाडीले अभ्यास गरिरहेको ठाउँ र खेलाडीले लुगा फेर्ने ठाउँमा पुगेर खेलाडीहरुलाइ धाप मारिरहेका हुन्छन्, प्रोत्साहन गरिरहेका हुन्छन्, हाम्रो देशबाट भने राजीनामा दिईसकेका मन्त्री ‘चोरबाटो’ हुँदै पेइचिङ जान्छन्।　खेलाडीको संख्याको चार गुना पदाधिकारीहरुको जन्ती हुन्छ। खेलाडीले पदाधिकारीले भन्दा ज्यादै कम भत्ता पाउँछन्। केहि समय पहिलाको एउटा साफ खेलकूदमा त पदाधिकारीहरु आफू प्लेनमा गएर खेलाडिहरुलाई रेलमा पठाएका थिए! देशभित्र अभ्यास स्थल र अवसरहरु दुबै कम छन्, त्यसमाथि राज्यले गर्ने ब्यबहार यस्तो भएपछि हाम्रा खेलाडीहरुले कसरी गतिलो परिणाम ल्याउँछन्! खेलकूद प्रबर्धन र विकासमा राज्यको अहं भूमिका हुन्छ। सरकारले खेल-जगतलाई निरन्तर प्रोत्साहन गरिरहन सक्नुपर्छ। हाम्रो जस्तो अवश्थामा त खेलकूद विकासलाई एउटा प्रमुख योजनाकै रुपमा अगाडि लगिनुपर्छ। देशको नाम-प्रतिष्ठा अभिवृद्धि गर्न खेलजगत पनि एउटा भरपर्दो माध्यम हो भन्ने कुराको वोध सरकार हाँक्नेहरुलाई हुनुपर्छ। खेलेर बाँच्न सकिने आत्मविश्वाश खेलाडीहरुमा पलाउन सक्यो भनेमात्रै देशको खेलजगतले गति लिनसक्छ। त्यसकारण उत्कृष्ट खेलाडीहरुलाई सकृय खेलजीबनपछिको रोजगारीको सुनिश्चितता दिनुपर्छ सरकारले। त्यो मात्रै हैन, अमेरिका, यूरोप, चीन आदि ठाउँहरुमा जस्तै विद्यालय, कलेजहरुमा खेलाडीहरुको लागि छात्रवृत्तिको ब्यबश्था गरिनुपर्छ।नीजि क्षेत्रले पनि धेरै गर्नसक्छ यसमा, त्यो साँचो हो तर बलियो राजनितिक इच्छाशक्तिका साथ सरकार आफैं पनि अगाडि सरेन भने प्रभावकारी केहि पनि हुनसक्दैन। अहिलेको अवश्थामा नीजि क्षेत्र पूरकमात्र हुनसक्छ।,साथमा खेलजगतका लागि आवश्यक हुने भौतिक पूर्वाधारहरुको विकास र संरक्षणको पनि उत्तिकै महत्व छँदैछ। यसरी कस्सिएर नलागी हाम्रा खेलाडीहरुले ओलम्पिकमा पदक जित्ने हाम्रा स्वर्ण सपनाहरु पूरा हुनेछैनन्। , (समाप्त)
ब्लगलाई समय मिलाउन झन-झन गाह्रो भइरहेछ। लेख्न मन लागेका अनगिन्ती कुराहरु मनका कुना-काप्चीमा थुप्रिएर आफ्नो पालो पर्खिरहेका छन्, कति हराईसके। हप्तामा कम्तिमा दुईटा टाँसो त जसरी भएपनि राख्छु भन्ने आफैंसंगको वाचा पनि तोडिया-तोडियै छ। जिन्दगी "काम पनि छैन, फुर्सद पनि छैन"को स्थितिबाट कहिले मुक्त हुने हो थाहा छैन।आज गाइजात्रा, तर यो टाँसोलाई 'गाइजात्रे' नठानिदिनुहोला:) 'बोन यासुमीको बारेमा मैले पोहरको एउटा टाँसोमा केहि कुरा गरेको थिएँ।प्रचण्ड गर्मी छ, गएको एक महिना यता अधिकतम तापक्रम धेरैजसो ३७-३८ छ र न्यूनतम पनि २८ को आसपास। यो टाउको दुखाउने गर्मीमा कतै गएर रमाइलो गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागिरहेको बेला साथीहरुले भनेजस्तो योजनाको बारेमा सुनाए। यो पालीको बोन यासुमीको रमाईलो त्यहि हो।नागोयमा बस्ने लगभग २७-२८ जना नेपालीहरुको हाम्रो टोली गिफु प्रान्तको खानी भन्ने शहरको निकै भित्री भागमा रहेको एउटा रमणीय प्राकृतिक स्थलमा पुगेको थियो बोन यासुमी मनाउन। चारैतिर घना जंगलले भरिएका अग्ला पहाडहरु र फेदीमा कलकल गरिरहेको कञ्चन खोला अनि खोलाकै किनारमा बनाईएको कलात्मक घर-यहाँभन्दा रमणीय के हुनसक्छ?! अर्को खुशीको कुरो, त्यो ठाउँमा मोबाईल फोनले काम गर्दो रहेनछ। ईण्टरनेट त त्यो ठाउँमा हुने कुरो पनि भएन। यसरी २०-२२ घण्टानै मात्रै भएपनि समाचार, फोनको कुराकानी आदिबाट मुक्त हुनुले मन-मष्तिष्कमा अचममको ताजगी भरिदिँदोरहेछ।सबै भेला भईसकेपछि नेपाली स्वादमा पकाइएको खसीको मासु र चिउरा खाईयो। नेपाली स्वादको खानाले नेपालै पुगेजस्तो गराउँछ जहिले पनि। त्यसपछि नजिकैको पहाड चढ्न भनेर हिँडियो। सर्प बेरिएजस्तै नागबेली बाटो बनाईएको रहेछ, माथिसम्म। त्यसकारण माथि पुग्न खास गाह्रो भएन। फेरि उचाइको हिसाबले हाम्रा पहाडहरुका दाँजोमा फुच्चेनै थिए त्यहाँका पहाडहरु, हामी चढेको पहाड (डाँडो भने बेश होला शायद!) पनि बढीमा पाँच सय मीटर अग्लो थियो होला। काठमाण्डौंको काँठ पनि डाँडाकाँडा भएकै क्षेत्र हो र त्यसबाहेक पनि विद्यालय पढुञ्जेल गुराँस टिप्न र काफल खान दहचोक, इन्द्रथान क्षेत्रका वनजंगल धेरै चहारिएकोले पहाड चढ्न गाह्रो लाग्दैन मलाई, रमाइलै लाग्छ। उकालो चढ्न शुरु गरेको केहि समयमै छोरी निदाईदिई। उसलाई बोकेरै चढियो उकालो, ओर्लेर फेदीमै आईपुगेपछि मात्रै ब्यूँझिई उ।त्यहाँ धेरै सुन्दर झरनाहरु थिए। धेरै साथीहरुले झरनामै नुहाए पनि। चरा-चुरुंगीको आवाज भने कमै सुनिन्थ्यो, देख्न त एउटा पनि देखिंन मैले।फर्केर बासमा आएपछि बार्बक्यू शुरु भयो। पोलेको मासु, नेपाली लोकगीत, बियर र साथीहरुको नाचले साँझलाई झन मादक बनाईदिएका थिए।नेपाली स्वादको र झोल हालेको कुखुराको मासुसंग भात खाएपछि बाहिरको कार्यक्रम सकियो। एउटा बिशाल हलमा लहर लागेर सुत्ने ब्यबश्था थियो। महिलाहरुलाई माथिल्लो तल्लामा त्यस्तै ब्यबश्था थियो। भित्र पसेपछि धेरैजसो साथीहरु तास खेल्न थाले। साथीहरुको कुरा सुन्नु र यदाकदा उनीहरुले खेलेको हेर्नुमै सीमित भएं म चाहिं। जति कोशिश गरेपनि तास खेल्नेमा रस बस्न सक्या' छैन मेरो। २ बज्ने बेलामा सुते पनि निद्रा पटक्कै लागेन। तास खेल्ने साथीहरु पाँच बजेतिरमात्रै सुते। तास खेलेर बसिरहेका एकजना साथी र म बाहिर निक्लियौं र धेरै बेर सुन्दर, शान्त र स्वच्छ बिहानीको आनन्द लिँदै खोलाको किनारको बाटो हिँड्यौं र खोलामै नुहाएर फर्कियौं।बिहानको खाजापछि पालैपालो गरेर फर्किईयो।छोटो यात्रा भएपनि मन-मष्तिष्क-शरीरलाई राम्रैसंग 'रिचार्ज' गरेको अनुभूति भयो। कार्यक्रमको ब्यबश्था मिलाउने साथीहरुलाई हृदयदेखिकै धन्यबाद! साथमा त्यो दिनको कार्यक्रममा सघाउने जापानी मित्रहरुलाई पनि उत्तिकै धन्यबाद!
अस्ति राती ढिलोसम्म ओलम्पिकको उद्घघाटन हेरेर बसें। जीऊ अलिक ठीक थिएन, थकाई त सधैं हुनेनै भयो, तैपनि अन्तिमसम्म हेरेर बसेको एउटै कारणचाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा ओलम्पिक स्तम्भको ज्योति कसरी बाल्दा रहेछन् भनेर हेर्न हो।उद्घघाटन कार्यक्रम निश्चयनै भब्य र कलात्मक थियो। कार्यक्रमका निर्देशक चाङ यी मो एक सफल चलचित्र निर्देशक हुन्। १९९०को दशकमा उनका चलचित्रहरुले ब्यापक ख्याति कमाएका थिए। त्यो ताकाका उनका धेरै चलचित्रहरु हेरेको छु मैले, एउटा 'डाइ-हार्ड फ्यान'नै थिएँ भनौं न। त्यतिखेर चिनियाँ सत्ताको कट्टरपन्थी पक्ष उनलाई त्यति मन पराउँदैनथियो। अहिले उनले ओलम्पिकको उद्घघाटन कार्यक्रमकै निर्देशक बन्ने अवसर पाए भन्ने कुराले केहि फरक स्थितिको बोध गराउँछ। चाङसंगै त्यो जिम्मेवारी पाएका हलीउडका स्पाइलबर्गले भने केहि समय पहिला राजीनामा दिएका थिए। चाङ यी मोका अचेलका चलचित्रहरु भने हेर्ने मौका मिलेको छैन।तारको सहाराले झुण्डिएका एक पूर्व खेलाडीले ओलम्पिक स्तम्भको ज्योति सल्काए। ओलम्पिक स्तम्भ कहाँ छ भन्नेनै देखिएको थिएन अन्तिमसम्म। ती खेलाडी स्टेडियमको माथि वरिपरि फनफनी घुम्दा संगसंगै देखिएको ओलम्पिक रिलेको फूटेजपनि भब्य र नयाँ थियो।मैले ओलम्पिकको उद्घाटन कार्यक्रमहरु हेर्न थालेको १९९२को बार्सेलोना ओलम्पिकबाट हो। र मलाई बार्सेलोना ओलम्पिकको ओलम्पिक स्तम्भमा ज्योति सल्काइएको तरिका सबैभन्दा रचनात्मक र सटीक लागेको छ अहिलेसम्म। एक खेलाडीले बलिरहेको वाण प्रहार गरेर सल्काएका थिए। कूरोलाई अब चीनतिरै मोडौं। एक जमानामा "पूर्वको रोगी मान्छे" भनेर चिनिने चीन अहिले सामरिक-आर्थिक संगै खेलकूदमा पनि विश्वशक्ति बनिसकेको छ। खेलकूद उनीहरुको संस्कृति र दैनिक जीवनको एक भाग बनिसकेको छ। यो ओलम्पिकमा सबैभन्दा धेरै स्वर्ण पदक पनि उसकै पोल्टामा जाने सम्भावना छ, अमेरिकालाई उछिन्दै।ओलम्पिक्स जस्तो महान खेल-उत्सब आयोजना गर्ने सपना हरेक देशसंग हुन्छन्। चीनको सपना आज पूरा भएको छ। यो भन्दा पहिला पनि चीन एक पटक आफ्नो सपना साकार पार्ने क्षणको नजिकै पुगेको थियो। सन् २०००को ओलम्पिक आयोजना गर्ने उसको पहल अन्तिम क्षणमा आएर सिडनीसंग पराजित भएपछि रोकिएको थियो। १९९३को ग्रीष्मको त्यो दिन याद छ मलाई। चीनमा साँझको आठजति बजिसकेको थियो। हामी पनि छात्रावासको टिभी हेरिरहेका थियौं। तेश्रो चरणसम्मको भोटिङपछि ओलम्पिक आयोजक हुने दावी गरिरहेका अरु शहरहरु बाहिरिसकेका थिए र पेइचिङ र सिड्नीमात्रै बाँकी थिए। चौथो चरणको भोटिङपछि अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटिका तत्कालीन अध्यक्ष हुवाँ एण्टोनिओ समाराञ्च परिणाम सुनाउन भनेर मञ्चमा आएपछि पूरै चीन टक्क अडिएजस्तो लागेको थियो। समाराञ्चले "The winner is---" भनेर एक एकछिन रोकिँदा त शायद पूरै चीनको सासनै रोकिएको थियो होला! "था' मा त----" समाराञ्चले आफ्नो घोषणालाई "Sydney" भनेर टुंग्याएपछि चीनका सडकहरुमा पोखिएको निराशा र आक्रोशको कथा बेग्लै छ।क्रमश:
२००८, अगष्ट ११मा अद्यावधिक:भूपि शेरचनको एउटा प्रसिद्ध कविता छ, "यो हल्लैहल्लाको देश हो" भन्ने। त्यो कविताको शुरुका केहि हरफहरु यी हुन्,कानमा इयरफोन लगाउनुपर्ने बहिराहरुजहाँ संगीत प्रतियोगिताका जज हुन्छन्र जहाँ आत्मामा पत्थर परेकाहरुकाव्यका निर्णायक मानिन्छन्,काठका खुट्टाहरु जहाँ रेसमा विजेता हुन्छन्र जहाँ प्लाष्टर गरिएका हातहरुमा सुरक्षाको संगीन थमाइन्छ------पूरै कविता यहाँ गएर पढ्न सक्नुहुन्छ।साहित्यको नेतृत्व कसले गर्ने?मेरो लागि प्रश्नको एउटै उत्तर छ, सटीक र सोझो, "साहित्यकारले!"अन्तरराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज (अनेसास) भन्ने संस्थासंग सम्बन्धित थिएँ म दुइ-अढाइ वर्ष। त्यसभन्दा पहिले यो संस्थाको बारेमा बिल्कूलै जानकारी थिएन मलाई। साझाको कारणबाट चिनिएका, जापानमै बसिरहेका केहि साथीहरुको अनूरोध अनुसार म यो संस्थाको जापान शाखाको उपाध्यक्षको रुपमा रहें, एउटा कार्यकारी समितिको पूरै कार्यकालभरि र त्यसपछिको वर्तमान कार्यकारि समितिमा केहि महिना। संस्थाका कार्यक्रमहरु टोकियो केन्द्रित हुनाले प्रत्यक्ष सहभागिता जनाउने मौका मिलेन कुनै पनि कार्यक्रमहरुमा। तैपनि विद्युतिय माध्यमहरुबाट भएपनि केहि कुराकानी र छलफलहरुमा भने भाग नलिईएको हैन र साहित्यिक जमघटहरुका लागि रचनाहरु पनि नपठाइएको भने हैन। अनेसासको अहिलेको केन्द्रीय अध्यक्षको रुपमा बिल्कूलै गैर-साहित्यिक ब्यक्ति चुनिएपछि मलाई त्यसभित्र बसिरहनु नैतिक रुपमा ठिक लागेन र राजीनामा दिएँ।कुरो अघि बढाउनु भन्दा पहिले एउटा कुरा के स्पष्ट पार्न चाहन्छु भने म आफूलाई 'घघडान' साहित्यकार त ठान्दिन तर कतिपय यस्ता संस्थाहरुका 'लाउके' भएर विभिन्न पदहरुमा टाँसिइरहेका मान्छेहरुको दाँजोमा भने 'गतिलै' साहित्यिक क्षमता भएको ठान्दछु। यसलाई कसैले मेरो अहं ठान्छ भने मेरो भन्नु केहि छैन।अनेसासको नयाँ केन्द्रीय 'नेता' देखेपछि अनेसास बाहिरका मान्छेहरु पनि 'छक्क' र 'पक्क' परेका हुन्!। यो 'एनआरएन' हो कि 'अनेसास' हो भन्ने छुट्याउन नसकिने भएपछि मान्छेहरु छक्क पर्नु नौलो कुरो भएन पनि। यो प्रकरणका कारण अनेसास भित्र केहि विवाद उठेको पक्कै हो। अनेसासभित्रको ती विवाद र असन्तुष्टिलाई भने कसरी थामथुम पारिएको छ, त्यहाँका हस्तीहरुनै जानुन्। तर उम्मेदवारीमै समाधान गरिईनुपर्ने यो प्रकरण यहाँसम्म आईपुगेको देख्दा भने त्यहाँका हस्तीहरुप्रति पनि टीठ लागेर आउँछ! अब मूल कुरोतिर। कुनैपनि विषयगत संस्थाको नेतृत्व संबन्धित विषयकै हुनुपर्छ, झन नेतृत्व भन्नेबित्तिकै त्यो क्षेत्रमा अलिक स्थापित पहिचान भएकै ब्यक्ति हुनैपर्छ। डाक्टरहरुको संस्थाको नेतृत्वमा डाक्टरहरुनै हुन्छन्, ईञ्जिनीयरहरुको संस्थामा ईञ्जिनीयरहरुनै हुन्छन्, कर्मचारीहरुले आफ्नो नेता कर्मचारीनै छान्छन्----। हो, साहित्यका हकमा को साहित्यकार हो र को होइन भन्ने छुट्याउन खल्तीबाट झिकेर देखाउन सकिने एक पाने प्रमाणपत्र अथवा 'जागिरे' परिचयपत्र हुँदैन, तर साहित्यकारको प्रमाणपत्र भनेकै उसका रचनाहरु र उसको साहित्यिक ब्यक्तित्व होइन र? त्यसकारण को कति साहित्यिक हो भनेर तौलनु कुनै गाह्रो काम होईन। साहित्य रचनाको नाममा जिन्दगीमा एउटा मुक्तक समेत नलेखेपनि आफ्नो बायो-डाटामा 'गोरखापत्र र कान्तिपुरमा धेरै रचनाहरु प्रकाशित' भनेर लेखेकै भरमा साहित्यिक ब्यक्तित्वमा दरिईन्छ भन्यो भने अन्त खिसीट्युरीको पात्र बनिन्छ, तर अनेसासमा यसलाई सामान्य रुपमा लिईँदो रहेछ। के अनेसासको आम सोचाई यहि हो? (केहि अनलाईन मिडियाहरुमा प्रकाशित लेखहरु र कुराकानीका आधारमा) मैले बुझेसम्म असन्तुष्टिलाई थामथुम पार्न अनेसासको 'माथि'बाट अनौठो तर्क दिइने गरिएको छ। 'नैतिक रुपमा त्यति ठिक त हैन तर वैध रुपमा छानिएको नेतृत्व भएकोले ठिकै छ।' भन्ने तर्क। यसको अर्थ, अनेसासभित्र 'नैतिक' आधारमा काम हुँदैन र कथित 'वैधानिकता'को कोरा तर्कलाईनै सर्वोपरी ठानिन्छ। नेपालको प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा कमल थापालाइ उप-कूलपति किन बनाईँदैन (कमल थापाकै नाम जोडेको चित्त बुझ्दैन भने वामदेव अथवा अर्जुन नरसिं वा अरु कसैको नाम राखे हुन्छ)? कानूनी रुपमा त त्यहाँ पनि समस्या नहोला। त्यसकारण, यो 'वैधानिकता'को तर्कमा कुनै दम छैन र यस्तो काइते तर्कले अनेसासको खोलबाट बाहिर चियाएको लाज छोपिनु त कता हो कता झन ह्वाङ्गै हुन्छ। केहि साथीहरु 'शायद ब्यबश्थापकीय कामको जिम्मा दिन राखिएको होला' भन्छन्। तर कथित 'ब्यबस्थापकीय' क्षमता पनि भएका साहित्यकारहरु नहुने हैनन्। अनेसास चलाउन चाहिने 'ब्यबस्थापकीय' क्षमता अनेसासका कुनै साहित्यिक मित्रमा पनि छैन भनेर म पत्याउँदिन। दोश्रो कुरो, गैर-साहित्यिक ब्यक्ति कार्यसमितिका लागि कुनै 'विशेष' कारणवश 'अपरिहार्य' भए अध्यक्ष बाहेकका पदमा ल्याए भैहाल्थ्यो। अर्कोतिर, सम्बन्धित ब्यक्तिको पनि रोजाई त्यहि हुनुपर्थ्यो, त्यसैमा विनम्रता झल्किने थियो। अनेसासभित्र धेरै स्थापित साहित्यकारहरु छन्, अहिलेका अध्यक्षले तिनको नेतृत्व गर्न खोज्नुमा चरम अहं र पदलिप्सा बाहेक केहि पनि देखिन्न। जापानमै रहेका केहि 'साहित्यकार'हरु भने प्रकाशकलाई पनि अध्यक्ष बनाउन सकिन्छ भन्छन्। पहिलो कुरो त, गैर-साहित्यिक 'विशुद्द ब्यापारी' प्रकाशक साहित्यकारहरुको संस्थाको अध्यक्ष भएको कतै पनि सुनिएको छैन। दोश्रो कुरो, प्रकाशक अध्यक्ष हुन पाउँछ भने वितरक पनि हुन पाउने भयो, किताब पसले पनि हुन पाउने भयो। अझ 'लोकतान्त्रिक' बनाएर कुनै आम पाठकलाईनै अध्यक्ष बनाए पनि भयो! ****************************************************यो ब्लगका पाठक मित्रहरु, शिर्षकको प्रश्नको जवाफ दिने पालो अब तपाईँको।
-लघुकथा-एक धर्को घाम“किन? के भयो? छोरीले झगडा गरी कि क्या हो?” छ बज्दा नबज्दै ब्यूँझन्छु म पनि। उनी छोरीलाई फुल्याइरहेकी छिन्।“अघि भर्खर एउटा एम्बुलेन्स गयो अगाडिबाट, त्यसकै आवाजले ब्युँझेकी हो। अलिअलि झर्केकी छे निद्रा बिग्रेकोले, अरु केहि पनि भ’ छैन।”छोरीले दूध खान पनि मानीरहेकी छैन र झर्कँदै-रुँदै गरीरहेकी छे।“काखमा राखेर हल्लाए निदाऊँछे कि---” म काखमा लिन्छु, तर छोरी मेरो काखमा आएपछि झन झर्किन्छे। र यतिखेरसम्म ऊ पूरै ब्यूंझिसकेकी छे। म छोरीलाई उनको काखमा राख्दिन्छु, तर छोरीले काखमा बस्न अझै मन नगरेपछि उनी उसलाई कार्पेटमा छोडिदिन्छिन्।छोरीको रुवाई बन्द हुन्छ अब। ऊ चार हात-खुट्टा टेकेर अडिन्छे, एकछिन हामीलाई हेर्छे, मुसुक्क हाँस्छे र बामे सर्न थाल्छे।“ल हेर त! कल्ले पत्याऊँछ साढे पाँच महिनाकी मात्रै भई भन्दा---?! ” बामे सरेर कोठा नापीरहेकी छोरीलाई हेरेर उनी मुस्कुराऊँछिन्।“हो त! हिजो फोनमा भन्दा आमाले त पत्याउनु भएन !”“छोरी कता तिमी? यता आऊ!” हामीले आँखा झिम्क्याउन नपाऊँदै छोरी झ्यालनिर पुगिसकिछे। ऊ त्यहाँ केहि समात्न खोज्दै थिई। अचेल बामे सर्नुसंगै उसले भेटेका कुरालाई समात्न र सकेजतिलाई मुखमा लान सिकेकी छे। जतिखेर पनि एकजना पछि नलागी सुखै छैन। झ्यालको पर्दा अलिक होड परेर भर्खर उदाएको घाम छिरेको रहेछ र त्यहाँ एउटा मसिनो उज्यालो धर्को बनेको रहेछ घामको। छोरी त्यै सुनौलो धर्कोलाई समात्न र तान्न खोज्दै थिई।हामी बूढाबूढी मुखामुख गरेर असमञ्जस भरिएको हाँसो साट्छौँ। अरु त के नै गर्न सक्छौँ र ?!धेरै बेर कोशिश गरेर पनि घामको धर्कोलाई तान्न नसकेपछि छोरी झर्किन्छे, अनि हामीतिर हेरेर च्याँठ्ठिएर रुन थाल्छे।“ओहो बाबा, छानु---, नलोऊ---नलोऊ, मेलो बाबा------” उनी छोरीलाई उठाएर छातीमा लगाऊँछिन् र फुल्याउन थाल्छिन्।छोरी एकैछिनमा फुलिन्छे र उनी फेरि उसलाई तलै राखिदिन्छिन्। छोरी खेल्दाखेल्दै फेरि घामको धर्कोमा पुग्छे तर यस पटक ऊ त्यो धर्कोलाई तान्न खोज्दिन, त्यसलाई नियाल्छे, आफ्ना कोमल हातहरु एकैछिन त्यसमाथि राख्छे अनि त्यसलाई छोडेर कोठाको अरु भागतिर दौडिन्छे। एकछिन खेलेपछि थाक्छे र कार्पेटमै निदाएर आफ्नो टुटेको निद्रा र टुक्रिएको सपनालाई पूरा गर्न थाल्छे। “खै छोरीको विछ्यौना लेऊ त।” म छोरीको विछ्यौना त्यो धर्कोनिर लगेर मिलाऊँछु अनि त्यो सुनौलो घामको धर्कोको एक भाग उसको निधारमा पर्ने गरी छोरीलाई विछ्यौनामा राखिदिन्छु।जीवनका सबै सौन्दर्य र सत्यहरुको प्रतीक बनेर घामको सुनौलो धर्को छोरीको निधारमा चम्किरहन्छ।------------------------------********************------------------------------ (यो पनि पूरानै रचना हो मेरो। यो सप्ताहान्त पनि नयाँ केहि लेख्न नसकी बित्यो र त्यसैले फेरि 'इतिहासको ब्याज' खर्च गरेर काम चलाउँदैछु।)